Wednesday March 04, 2020 - 14:17:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Kenya ayaa xusulduub ugu jirto sidii ay gabi ahaanba ciidamadeeda ugala bixi laheed gobollada Gedo iyo Jubbada hoose ee dalka Soomaaliya oo ay duullaan gardarro ah ku joogaan wax ka badan 8 sano xiriir ah.
Markii ugu horraysay ayay dowladda Kenya Iclaamisay in ay ciidamadeeda ka saarayso howlgalka AMISOM oo ah dallad ay ku bahoobeen dowladaha ciidamadoodu kusoo duuleen Soomaaliya.
Warbixin lagu daabacay Wargeyska Daily Nation ayaa lagu sheegay in wasiiradda difaaca Kenya haweenayda lagu magacaabo Monica Juma ay wadahadallo lafurayso madaxda midowga Afrika oo ku aaddan sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa Soomaaliya iyo dalladda AMISOM intaba.
Ilo wareedyo ayaa wargeyska u sheegay in wadahadalladan looga golleeyahay qaabka ay ciidamada Kenya uga bixi lahaayeen Soomaaliya ka hor inta aan lagaarin sanadda 2021 oo ah waqtiga laduu duubayo calanka howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Sida warbaahinta Kenya faafisay xukuumadda Nairobi waxay doonaysaa in ay Ururka Midowga Afrika ku qanciso in ka bixitaanka ciidamadeeda Soomaaliya uusan noqon mid anfariir ku ridda waxa loogu yeero beesha caalamka.
Bishii October 2011 ayay ciidamada Kenya kasoo tallaabeen xuduud beenaadka waxayna toos ugu biireen duullaanka shareeca ladirirka ah iyagoo marmarsiimo ka dhiganaya ka hortagga weeraro uga yimaad Shabaabul Mujaahidiin balse taas bedelkeed Al Shabaab ayaa howlgalladeeda uraratay gudaha Kenya.
Weerarada dhabbagal ah, kuwa cagmarinta ah iyo qaraxyada lagu beegsado kolonyada gaadiidka ciidanka KDF ayaa sababay in dowladda Kenya ay wax ka bedesho joogitaankeeda gudaha dalka Soomaaliya.
Weeraradii ugu khasaaraha badnaa abid ee ciidanka Kenya ay lakulmaan waxay ka dhaceen deegaannada Ceelcadde iyo Kulbiyoow oo ka kala tirsan gobollada Gedo iyo Jubbada hoose ee Koonfurta Soomaaliya.
Xaliima Yareey oo sheegtay in doorashadu aysan dhici karin waqtigii loo asteeyay.